ကျောက်နီမော်မှ မုဒိန်းကျင့်လူသတ်ကောင် ထက်ထက်၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » ကျောက်နီမော်မှ မုဒိန်းကျင့်လူသတ်ကောင် ထက်ထက်၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း
ကျောက်နီမော်မှ မုဒိန်းကျင့်လူသတ်ကောင် ထက်ထက်၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း
Posted by chityimhtoo on Jun 4, 2012 in Members | 16 comments
၁၉၇၅ခုနှစ် ………….. ကျောက်နီမော်ရဲစခန်း စခန်းမှူးမှ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ရပ်မိရပ်ဖများအား ဖိတ်ကြားပြီး၊ ကျောက်နီမော်ရွာ ဗုဒ္ဒဘာသာသုသာန်(ယခုကျောက်နီမော်တိုက်နယ်ဆေးရုံနေရာ၊ ရဲစခန်းအနီး) တွင် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို စွန့်ပြစ်ထားကြောင်း၊ ကလေးငယ်၏အမည်မှာ မောင်ကျော်သောင်းဖြစ်ပြီး မိဘများမှာ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟုံးဝရွာနေ ဦးအောင်ဘာလေ၊ ဒေါ်အာဒါးမတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ကလေး၏မိဘများသည် ကလေးငယ်ကို စွန့်ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြကြောင်း၊ ယခုအခါ မောင်ကျော်သောင်းအား မွေးစားမည့်သူ လိုအပ်နေပြီး၊ မောင်ကျော်သောင်းမှာ ရခိုင်လူမျိုး၊ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်မိဘများမှ မွေးဖွားလာသူဖြစ်သဖြင့် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှ ရခိုင်လူမျိုး၊ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ရပ်မိရပ်ဖများမှ ကလေးငယ်၏ နောင်ရေးကို စီစဉ်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
မောင်ကျော်သောင်း၏ဖခင် ဦးအောင်ဘာလေသည် ဟုံးဝကျေးရွာတွင် အမြဲတမ်းမူးယစ်ရမ်းကားသည့် လူဆိုးစာရင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ကျောက်နီမော်ရဲစခန်းမှ အချုပ်ခန်းနှင့် ကျောက်ဖြူထောင်တို့ကို ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကဲ့သို့သဘောထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရပ်မိရပ်ဖများမှာ ကလေးငယ်မောင်ကျော်သောင်းကို သနားသော်လည်း ၄င်း၏မိဘဆွေမျိုးများ၏ အကျင့်နှင့် စရိုက်ကို သိနေခြင်းနှင့် မပတ်သက်လိုခြင်းတို့ကြောင့် မည်သူမျှ မမွေးစားရဲကြပေ။ ထိုအချိန်တွင် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ထရံရွာနေ ကုန်သည် ဦးကာလာချေမှ မောင်ကျော်သောင်းအား မွေးစားမည့်သူမရှိလျှင် မိမိအနေဖြင့် အမွေစားအမွေခံသားတစ်ဦးအဖြစ် မွေးစားလိုပါကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ စခန်းမှူးမှ ဦးကာလာချေသည် မွတ်စလင်ဖြစ်နေသဖြင့် ရခိုင်၊ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ရပ်မိရပ်ဖများ၏ ဆန္ဒကိုတောင်းခံပြီး အများ၏ဆန္ဒနှင့်အညီ ဦးကာလာချေအား မွေးစားခွင့်ပြုလိုက်ပါသည်။
ဦးကာလာချေတို့ဇနီးမောင်နှံသည် ကုန်သည်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျောက်နီမော်ရွာ ကြေးရည်တတ်လူတန်းစားတွင်ပါဝင်သော်လည်း သားသမီးမရှိသဖြင့် မောင်ကျော်သောင်းအား သားအရင်းတစ်ဦးကဲ့သို့ အထူးအလိုလိုက်အချစ်ပိုခဲ့ကြပါသည်။ ဦးကာလာချေတို့ဇနီးမောင်နှံသည် ရှိသမျှစည်းစိမ်ဥစ္စာပုံအောပြီး ပညာသင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသော်လည်း မောင်ကျော်သောင်းသည် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျောင်းမတက်တော့ဘဲ မိဘပိုက်ဆံဖြုန်းတီးကာ ရပ်ရွာထဲတွင် ဆိုးသွမ်းလူငယ်အဖြစ်သာကြီးပြင်းလာခဲ့ပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘများကိုလည်း အိမ်တွင်းရိုက်နှက်ခြင်း၊ ညှည်းပမ်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ရုံမျှမက လူစည်ကားရာ လမ်းမလယ်ခေါင်ပေါ်တွင်၊ လည်ပင်းကိုဓါးဖြင့်လှီးဖြတ်အနာတရဖြစ်စေသည်အထိ မိုက်ရိုင်းဆိုးသွမ်းခဲ့ပါသည်။ ဘမျိုးဘိုးတူ မောင်ကျော်သောင်း၏ ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများမှာ ကျောက်နီမော်ရဲစခန်းပြစ်မှုမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ အများအပြားနေရာယူခဲ့ပါသည်။ ဦးကာလာချေတို့ ဇနီးမောင်နှံမှာ မောင်ကျော်သောင်း၏ ဆိုးသွမ်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်မှ တိမ်းရှောင်ရင်း မိမိတို့အိမ်တွင်ပင်မနေကြရတော့ဘဲ ဆွေမျိုးနီးစပ်သူများ၏အိမ်များတွင် ကပ်နေကြရပြီး ဘ၀တစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့ကြပါသည်။
မောင်ကျော်သောင်းသည် မွေးစားမိဘများရှိစဉ်ကတည်းက အိမ်ထောင်ချပေးခဲ့ပြီး မောင်ထက်ထက် ဟူသည့် သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ကြက်မှာအရိုး၊ လူမှာအမျိုးဟူသော ဆိုရိုးစကားနှင့်အညီ မောင်ထက်ထက်သည် ဘမျိုးဘိုးတူပီသစွာ မူးယစ်ရမ်းကားခြင်း၊ လုယက်ခြင်းစသည်ဖြင့် ကျောက်နီမော်ရဲစခန်း၏ ပြစ်မှုမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဆက်လက်နေရာယူနေခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ထရံရွာနှင့် အခြားရွာများသို့ ဆက်သွယ်သော လမ်းပေါ်တွင် သွားလာသည့် လမ်းသွားလမ်းလာများထံမှ လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ လုယက်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ အရက်ဖိုးတောင်းခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများအား ကာအိနြေ္ဒကို ထိခိုက်စော်ကားခြင်းများကိုလည်း အတင့်ရဲစွာ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်လာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားသော်လည်း မောင်ထက်ထက်မှာ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်သည့်အပြင် အဖေဘက်မှဋ္ဌာနပိုင်းဆိုင်ရာလူကြီးမိသားစုဝင်များ ရမ်းဗြဲမြို့နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တခြားမြို့ကြီးများတွင်ရှိနေသည့်အတွက် ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့် (၂၈.၅.၂၀၁၂) နေ့တွင် မသီတာထွေးအား လူမဆန်စွာ အဓ္ဓမပြုကျင့် သတ်ဖြတ်မှုကိုပါ ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့ပါသည်။ ရဲစခန်းမှ (၂၄)နာရီအတွင်း တရားခံများကို ဖမ်းမိသည်ဟု သတင်းများတွင် ဖေါ်ပြသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်မူ ကျောက်ထရံရွာသားမွတ်စလင် ရပ်မိရပ်ဖများမှလျှို့ဝှက်စုံစမ်းပြီးတရားခံများကိုသိလျှင်သိချင်း ရဲစခန်းအားအကြောင်းကြားဖမ်းဆီးစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မောင်ထက်ထက်၏အဖေ ဦးကျော်သောင်းတွင် ဦးကျော်သန်းဆိုသော ဒုရဲအုပ်အကိုတစ်ယောက်ရှိပြီး၊ ဆွေးမျိုးများထဲတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌားနတွင် မြို့နယ်မှူးတစ်ဦးနှင့် ရှေ့နေတစ်ဦးလည်း ရှိပါသည်။ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံလူအများစိုးရိမ်နေသလို မောင်ထက်ထက်မိသားစုမှ အမှုမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီး အမှုနှင့် မသက်ဆိုင်သော အခြားမွတ်စလင်လူငယ်များအားဆွဲ
ထည့်ရန်န်ကြိုးစားနေသလို၊ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်များနှင့် လောဘသားစီးပွားရေးသမားတချို့မှလည်း တောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ် ဆိုသလို ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မွတ်စလင်များအကြား လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်လာအောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆ်ာနေပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
ဒီသတင်း က အမှန်ပါဘဲ။ဒီနေ့ ဘဲ RNDPက ဒေါက်တာအေးမောင်ပြောသွားတာလေး
“ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုက ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ 
အင်းသတင်းတွေ့လို့သာဖတ်ရအောင်တင်လိုက်တာ ဘာကိုယုံရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ညဏ်ပဲတိမ်တာလား ၊ညဏ်ပဲ မမှီတာလားတော့ မသိဘူး၊”မောင်ကျော်သောင်း၏ဖခင် ဦးအောင်ဘာလေသည် ဟုံးဝကျေးရွာတွင် အမြဲတမ်းမူးယစ်ရမ်းကားသည့် လူဆိုးစာရင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ကျောက်နီမော်ရဲစခန်းမှ အချုပ်ခန်းနှင့် ကျောက်ဖြူထောင်တို့ကို ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကဲ့သို့သဘောထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရပ်မိရပ်ဖများမှာ ကလေးငယ်မောင်ကျော်သောင်းကို သနားသော်လည်း ၄င်း၏မိဘဆွေမျိုးများ၏ အကျင့်နှင့် စရိုက်ကို သိနေခြင်းနှင့် မပတ်သက်လိုခြင်းတို့ကြောင့် မည်သူမျှ မမွေးစားရဲကြပေ။”ဒီလိုလဲ ရေးထားတယ်….ပြီးတော့….ဒီလိုလဲ တစ်ခါဆိုထားသေးတယ် “မောင်ထက်ထက်၏အဖေ ဦးကျော်သောင်းတွင် ဦးကျော်သန်းဆိုသော ဒုရဲအုပ်အကိုတစ်ယောက်ရှိပြီး၊ ဆွေမျိုးများထဲတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌားနတွင် မြို့နယ်မှူးတစ်ဦးနှင့် ရှေ့နေတစ်ဦးလည်း ရှိပါသည်။ ” ၁၉၇၅ လောက်တုန်းက စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ကလေးက ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကလေးကိုမွေးလိုက်တာ ဘယ်အချိန်က များ မိန်းမယူလိုက်တာပါလိမ့်…..
John Ak says:
Imm 1975 mhar 10 hnit lout shi tal boy ka mway tae kalay kaahku so kha myar ama ko par u p child twe mway yin football club tg htaung lox ya tal…p yin dar ka lote kyan zat lann ma hote woo..kya myar $ brain tay tay lay na’ tot bal nyan hmi ma lal…$yuu..chee brain kg ye’.police twe ko poocket hte’ mhar htar htar tae gangstar twe myar myanmar mhar paw lon lox..$yuu ye’
ဒီလို အကျင့်ဆိုးတွေ ရှိနေလို့သာ အဖြစ်အပျက်ဆိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာ
ကြက်မှာ အရိုး လူမှာ အမျိုးမို့ ။
တရားခံများကို သူရို့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်ဒဏ်အတိုင်း တရားစီရင်ချက် အမြန်ဆုံးချနိုင်ပါစေ ။
အေးငြိမ်းတည်ငြိမ်သော တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်လာပါစေ ။
အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေ ။
င်္FB မှာ ကျုပ်တို. မန်းဂေဇတ်ပွားခံနေရဘီ။တဆိပ်ရှိ လူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်။ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း
ကုလားမှာ အေးတဲ့တဲ့ကုလားက လူပွားပီးသူတို.ဘာသာပြန်.အောင်လုပ်တယ်။ပုံမှန်နဲ.အ
စွန်းရောက်တဲ့ကုလားတွေက အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းသုံးကြတယ်။ရိုးရိုးလေးပဲ လက်တွေ.လည်းမြင်နေ ကြားနေ
အဲ့ကောင်တွေေxာက်ဆင့်လောက်နဲ့ တော့
ဂေဇက် သိက္ခာ ကို ချလို့ မရပါဘူးဗျာ
ရိုးရိုးအေးအေးနဲ့ နေတဲ့ လူက မဖြစ်စလောက်ပါ
ကပ်ပတိန်ရေ ၊ ခင်ဗျားနဲ့ ထပ်တူရှိတယ်ဗျို့ 
ကျေးဇူးတင်တယ် ကိုပေရေ ပျော့လို.မရတော့ဝူး။ကျုပ်တို.တိုင်းရင်းသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘက်ကလည်း
ကျုပ်ရုံးကိစ္စနဲ.ဘူးသီးတောင် မောင်တောဘက်ရောက်ဖူးတယ် ရောက်ဖူးမှ ဘာသာရေးခွဲခခြားတယ်
လူမျုိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြောကြ ပုံလေးတွေမြင်ပီင်္း ပါးစပ်လေးတစ်ပေါက်နဲ.ဝိုင်း
မသနားကြနဲ.။ကိုယ်တွေ.ကြုံဖူးမှပြော။ကျုပ်တို.နိုင်ငံ Al-Queda ပစ်မှတ်တစ်ခု ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ
ရေးဆက်ကျင့်သုံး နောက်နှစ် ၅၀ ၆၀ အတွင်းဗမာပြည်မပျောက်ရင်ကြိုက်သလိုပြော။ကျုပ်တို.ကသာ
သူတို.ကိုအထာ ထားတာ ကျုပ်တို.အပေါ်ဘာအထာမှ ထားတာမဟုတ်ဖူး။ဆက်နုံနေကြအုန်း ပီးရင်
ကို captainamerica ရေ အနော်လဲပါမယ်ဗျာ ချိန်းလိုက်
ဖြစ်နှိုင်ရင်ဖွတဲ့လင့်လေးထည့် ခွေးကောင်တွေ ဂေဇက်မှာဝင်ပြီး သောင်းကျန်းနေတာတော့ သိတယ်။
ဒီကောင်တွေကို လိုက်ရှင်းပြနေရတာ တော်တော် လက်ညောင်းနေပြီ။
ကျွန်တော့ ကော်မန့်အတော်များများက ဒီကောင်တွေကို ရှင်းရတာများတယ်။
အခုလဲ ၀င်မပြောချင်လို့ ခပ်ကင်းကင်းနေကာမှ ဒီေxာက်ရှက်မရှိကောင်တွေကြောင့်
သတ္တိရှိရှိပြောပါ ဘာကြောင့် ဆဲရတယ်။ဘာအတွက်ဆဲ ရတယ်။
ဗမာလိုရိုက်ပါ၊ မဟုတ်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောပါ။ဗားဂလိ ငါမသိ။
ဟူးးးးး Barglish နဲ့ ဆဲသူ၊ပေါ်တင်ဆဲသူ. စုံစီနဖာပါလား ကိုခိုင်ရေ။
အမှားအမှန်တော့ မြင်တတ်ကြသေးရံ့ လားဗျာ။
ဖေ့ဘုတ်က သိပ်မသုံးတော့ ဘယ်နားဝင်ရေးရမှာလဲ သေချာမသိဘူးဟ
ပထမဆုံးပြောချင်တာက မဆဲကြပါနဲ့ ခင်ဗျား။
လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲပါ မမိုက်ရိုင်းကြပါနဲ့။
ဒုတိယ။ ကိုကောင်းမြတ်ကျော် တော်ပါတော့ခင်ဗျား။
ခင်ဗျားသာဗမာဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က ပါရမှာပါ။
ထားပါ ကျွန်တော်တို့လွန်သွားပါပြီ။ဒါပေမယ့် ဒေသခံတွေရဲ့ ခံစားချက်ကိုလဲမသိ၊
ခင်ဗျားရေးထားတာတွေက ရခိုင်တွေကိုသွားစော်ကားတော့ ပြသနာပို တက်လာနှိုင်လို့ပါ။
တတိယ။ မဆိုင်တဲ့သူတွေကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြို့ ကိုဖျက်ဆီးစော်ကားရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်
ကန့်ကွက်မယ်၊လိုအပ်ရင် ရခိုင်တွေဘက်ကပဲကာကွယ်ပါမယ်။(အရင် ဘယ်သူစစော်ကားခဲ့ပါသလဲ)
စတုတ္ထ။ လူမဆန်တာအားလုံးကန့်ကွက်တယ်။အခုလို ရခိုင်တွေလုပ်တာလဲ ကန့်ကွက်တယ်။
ပဉ္စမ။ ငါဟာမြန်မာဖြစ်တယ်အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာစော်ကားလာရင် ငါလည်းသည်းမခံနှိုင်ဘူး။
အခုဆဲနေသူတွေဟာလဲ အသစ်ဝင်လာတာ။မန်းလေးဂေဇက်ကို မဖွပါနဲ့။သတ္တိရှိရှိပြော၊ အမှန်အတိုင်းရေး
စိတ်ဓါတ်များ အောက်တန်းမကျပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရင်းးးးးးးးးးးး
ဟို ကြက်ငှက်ကို ကော်မန့် ပိတ်လို့ ဒီမှာတင်ထားဒါဘာာာ……….